Ny fanjakan'Andriamanitra (Fizarana 2) - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
haino aman-jery > Journal succession > 2014-04 mpandimby ny Magazine > Ny Fanjakan'Andriamanitra (ampahany 2)
ity ny 2. Ampahany amin'ny andiany 6 an'i Gary Deddo momba ny lohahevitra manan-danja, saingy matetika tsy takatry ny saina, momba ny Fanjakan'Andriamanitra. Tamin'ny fizarana farany dia nanasongadina ny maha-zava-dehibe an'i Jesosy amin'ny maha-Mpanjaka avo indrindra amin'ny mpanjaka rehetra sy Tompo ambony indrindra momba ny fanjakan'Andriamanitra isika. Hodinihintsika ato amin'ity lahatsoratra ity ny fahasarotan'ny fahatakarana ny fisian'ny fanjakan'Andriamanitra eto sy ankehitriny.
Ny fisian'ny fanjakan'Andriamanitra amin'ny dingana roa
Ny fanambarana ara-Baiboly dia manome endrika roa izay sarotra mampihavana: ny fanjakan'Andriamanitra dia misy fa koa amin'ny ho avy. Ny manam-pahaizana ara-baiboly sy teolojiana matetika dia nandray ny iray tamin'izy ireo ary nanome lanja manokana ny iray amin'ireo lafiny roa. Saingy nandritra ny 50 taona lasa izay na mihoatra izany dia nisy ny fifanarahana mivaingana momba ny fomba tena hahafantarana ireo fomba roa ireo. Mifandraika amin'ny hoe iza moa i Jesosy.
Ny Zanak'Andriamanitra dia nateraky ny virijiny Maria tamin'ny 2000 taona lasa izay, niombona tamin'ny fisiantsika olombelona ary niaina tao anatin'ny tontolontsika mpanota nandritra ny 33 taona. Amin'ny alàlan'ny fieritreretana ny maha-olona antsika hatrany am-piandohan'ny nahaterahany mandra-pahafatiny1 ary niaraka tamin'io, niaina tamin'ny nahafatesantsika hatramin'ny nitsanganany tamin'ny maty Izy, avy eo niakatra tany an-danitra taorian'ny andro vitsivitsy nisehoany tamin'ny olona; izany hoe mbola miraikitra amin'ny maha-olombelona antsika ihany izy, afa-tsy ny fiverenan'ny rainy ihany ary ny fifandraisana tonga lafatra aminy. Vokatr'izany dia na dia mbola mandray anjara amin'ny maha-olombelona be voninahitra antsika aza izy, dia tsy misy intsony toy ny taloha talohan'ny niakarany. Amin'ny fomba iray dia tsy eto an-tany intsony izy. Amin'ny maha mpanentana hafa azy, dia nandefa ny Fanahy Masina hiaraka amintsika izy, fa amin'ny maha-mpandraharaha mahaleo tena azy, tsy eo intsony isika toy ny taloha. Na izany aza, dia nanome toky ny hiverina izy.
Mandritra izany fotoana izany dia azo jerena ny votoatin'ny fanjakan'Andriamanitra. Tena "akaiky" tokoa izy io ary nandaitra tamin'ny fotoana nanompoan'i Jesosy an'izao tontolo izao. Tena akaiky sy azo tsapain-tanana izany ka nitaky valiny teo no ho eo, sahala amin'i Jesosy mihitsy no nitaky valiny avy amintsika tamin'ny endrika finoana azy. Na izany aza, rehefa nampianatra anay izy, dia mbola tsy nanomboka tanteraka ny fanapahany. Mbola ho lasa zava-misy tanteraka izy io. Ary izany dia amin'ny fiavian'i Kristy fanindroany (izay matetika antsoina hoe "fiaviany faharoa").
Noho izany, ny finoana ny Fanjakan'Andriamanitra dia azo ampifamatotra amin'ny fanantenan'ny fahatanterahany tanteraka. Efa tao amin'i Jesosy io ary efa nijanona tamin'ny alàlan'ny Fanahiny Masina. Fa mbola tonga ny fahatanterahana azy. Matetika aseho izany rehefa voalaza fa efa misy ny Fanjakan'Andriamanitra, saingy tsy mbola tonga amin'ny fahatanterahana. Ny asa fikarohana ataon'i George Ladd dia manasongadina io fomba fijery io amin'ny fomba fijerin'ny Kristiana mpivavaka maro, farafaharatsiny eo amin'ny tontolo miteny anglisy.
Ny Fanjakan'Andriamanitra sy ny fahantrana roa
Araka ny fahazoan'ny Baiboly dia misy fanavahana mazava eo anelanelan'ny in-droa, vanim-potoana roa na vanim-potoana: ny "fotoanan'izao tontolo izao ratsy" ankehitriny sy ilay antsoina hoe "fotoanan'izao tontolo izao". Eto isika sy izao dia miaina amin'ny "fotoanan'izao tontolo izao ratsy" ankehitriny. Miaina ny fanantenana an'io »ho avy izao isika, saingy mbola tsy niaina izany. Raha resahina ara-Baiboly dia mbola miaina amin'ny andro ratsy ankehitriny isika - izany hoe amin'ny fotoana misimisy. Ny andalan-tsoratra masina izay manohana mazava tsara io fomba fijery io dia toy izao (Raha tsy misy fanamarihana hafa, ireto teny nalaina avy ao amin'ny Baiboly ireto dia avy amin'ny Baiboly Zurich.):
Navelany hiasa teo amin’i Kristy io hery io rehefa nanangana Azy tamin’ny maty Izy ka nametraka Azy tany an-danitra teo an-kavanany: ambony noho ny antokony rehetra, ny hery rehetra, ny fahefana sy ny fanapahana ary ambonin’ny anarana rehetra, tsy amin’izany ihany, fa amin’ny ho avy koa. ny fotoana izao tontolo izao no atao hoe » (Efes 1,20- iray).
“Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin’Andriamanitra Raintsika sy Jesosy Kristy Tompo, Izay nanolotra ny tenany noho ny fahotantsika, mba hanalana antsika amin’izao andro ratsy ankehitriny izao, araka ny sitrapon’Andriamanitra Raintsika.” (Galatiana 1,3- iray).
“Lazaiko aminareo marina tokoa: Tsy misy olona nahafoy trano, na vady, na rahalahy na anabavy, na ray aman-dreny, na zanaka noho ny amin’ny fanjakan’Andriamanitra, ka tsy mahazo zavatra sarobidy kokoa noho izao fiainana izao, ary amin’ny andro ho avy dia mandrakizay. fiainana” (Lioka 18,29-30; Baiboly vahoaka).
“Ary ho toy izao no hatao amin’ny fahataperan’izao tontolo izao: hivoaka ny anjely ka hanavaka ny ratsy fanahy amin’ny marina” (Matio 1.3,49; Baiboly vahoaka).
“[Ny sasany] efa nanandrana ny teny tsaran’Andriamanitra sy ny herin’ny tontolo ho avy.” (Hebreo 6,5).
Ity fahatakarana manjavozavo ny vanim-potoana na vanim-potoana ity dia indrisy tsy dia mazava loatra amin'ny filazalazana fa ny teny grika hoe "taona" (aion) dia nadika tamin'ny fomba maro, ohatra amin'ny "mandrakizay", "izao tontolo izao", "mandrakizay", ary "a taloha be ". Ireo fandikan-teny ireo dia mampifanohitra ny fotoana amin'ny fotoana tsy misy farany, na ity fanjakana eto an-tany ity amin'ny fanjakana any an-danitra amin'ny ho avy. Raha ireo fahasamihafana ara-nofo na ara-potoana ireo dia efa ao anatin'ny fieritreretana ny vanim-potoana na vanim-potoana samihafa, dia manasongadina manokana ny fampitahana lavitra kokoa ny fomba fiaina hafa ankehitriny sy amin'ny ho avy.
Ao amin'ny fandikan-teny sasany dia mamaky isika fa ny voa maniry amin'ny tany sasany dia voatsindrona amin'ny tsimoka amin'ny "fanahy izao tontolo izao" (Marka. 4,19). Koa satria ny teny grika hoe aion dia ao amin’ny soratra tany am-boalohany, dia tokony hampiasaina koa ny dikan’ny hoe “nopotehin’ny fanahiana amin’izao andro ratsy izao”. Ao amin’ny Romana 1 koa2,2Rehefa mamaky isika fa tsy te hifanaraka amin’ny teti-dratsin’ity “tontolo ity”, izany koa dia tokony ho takatra amin’ny fomba izay tsy tokony hitovizantsika amin’izao “fotoan’izao tontolo izao” izao.
Ny teny nadika hoe “fiainana mandrakizay” dia midika koa hoe fiainana amin’ny andro ho avy. Izany dia voalaza ao amin’ny Filazantsaran’i Lioka 18,29-30 mazava tsara araka ny voalaza etsy ambony. Ny fiainana mandrakizay dia “mandritra ny fotoana rehetra”, nefa zava-dehibe kokoa noho ny faharetany izany, izay lava kokoa raha oharina amin’izao vanim-potoana ratsy izao! Fiainana manana vanim-potoana na vanim-potoana hafa tanteraka izany. Ny fahasamihafana dia tsy eo amin'ny fotoana fohy raha oharina amin'ny fiainana lava tsy manam-petra, fa eo amin'ny fiainana izay mbola voamariky ny fahotana amin'izao androntsika izao - ny faharatsiana, ny ota ary ny fahafatesana - sy ny fiainana amin'ny ho avy, izay misy soritra rehetra. ny ratsy dia havotana. Amin’ny fotoana ho avy dia hisy lanitra vaovao sy tany vaovao izay hampifandray fifandraisana vaovao. Ho fomba hafa tanteraka izany, dia ny fomba fiainan’Andriamanitra.
Ny fanjakan'Andriamanitra dia mifanandrify amin'ny fotoana ho avy, dia ny fiainana mandrakizay sy ny fiverenan'i Kristy. Mandra-piverina aminy dia miaina ao anatin'ny tontolo ratsy amin'izao fotoana izao isika ary manantena ny ho avy. Mbola manohy miaina ao anatin'ny tontolo mpanota isika, na dia eo aza ny fitsanganan'i Kristy sy ny fiakaran'i Kristy, tsy misy zavatra tonga lafatra, ny zavatra rehetra dia mihena tanteraka.
Mahagaga anefa, na dia manohy miaina amin'ny vanim-potoana ratsy amin'izao fotoana izao aza isika, noho ny fahasoavan'Andriamanitra, dia efa afaka miaina amin'ny ampahany amin'ny fanjakan'Andriamanitra isika. Amin'ny fomba iray izany dia eto an-tany ary ankehitriny alohan'ny fanesorana ny vanim-potoana ratsy ankehitriny.
Mifanohitra amin'ny eritreritra rehetra, ny fanjakan'Andriamanitra ho avy dia niditra an-tsokosoko amin'izao fotoana izao tsy misy ny Fitsarana Farany sy ny fahataperan'ity fotoana ity ho avy. Ny fanjakan'Andriamanitra dia manaloka ny alokalony eto sy izao. Mahazo mialoha mialoha an'io isika. Ny fitahiany sasany dia tonga amintsika eto sy ankehitriny. Ary azontsika atao ny mandray azy io eto ary ankehitriny amin'ny fihazonana ny fiombonantsika amin'i Kristy, na dia mbola mijanona mifamatotra amin'ity fotoana ity aza isika. Azo atao izany satria tonga teto amin'izao tontolo izao ny Zanak'Andriamanitra, nahavita ny iraka nampanaovina antsika ary nandefa ny Fanahiny Masina ho antsika, na dia tsy nofo intsony aza. Ankehitriny isika dia mankafy ny vokatra voalohany amin'ny fitondrany mandresy. Saingy alohan'ny hiverenan'i Kristy dia hisy fotoana vonjimaika (na "fiatoana amin'ny fotoana famaranana", araka ny niantsoan'ny TF Torrance azy) izay hanohizana ny ezaka famonjena ataon'Andriamanitra mandritra io fotoana io.
Ny fananganana ny voambolana soratra masina, ny Mpianatra ny Baiboly ary ny teolojiana dia nampiasa teny isan-karazany mba hanazavana io toe-javatra sarotra io. Betsaka, manaraka an'i George Ladd, no naneho ity hevitra mampiady hevitra ity tamin'ny filazany fa tanteraka ao amin'i Jesosy ny maha-Tompon'Andriamanitra azy, saingy tsy hitranga izany mandra-piveriny. Efa eo ny fanjakan'Andriamanitra, saingy mbola tsy tanteraka tanteraka izany. Ity dinamika ity koa dia azo aseho amin'ny fomba efa nampidirina ny fanjakan'Andriamanitra, saingy miandry ny fahavitany isika. Indraindray io fiheverana io dia antsoina hoe "eschatology ankehitriny". Noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia efa nifindra hatramin'ny ankehitriny ny ho avy.
Misy fiantraikany fa ny fahamarinana sy ny zava-misy rehetra nataon'i Kristy dia esorina tsy ho azon'ny fahitana ankehitriny, satria mbola miaina eo ambanin'ny fepetra nateraky ny Fahalavoana isika. Amin'izao tontolo ratsy izao dia efa misy ny fanjakan'i Kristy, fa ny miafina kosa. Amin'ny ho avy, dia ho tanterahana tanteraka ny Fanjakan'Andriamanitra satria hofoanana ny vokatry ny Fahalavoana rehetra. Ny vokatra feno amin'ny asan'i Kristy avy eo dia haseho amin'ny voninahitra rehetra na aiza na aiza.2 Ny fanavahana natao eto dia eo anelanelan'ny Fanjakan'Andriamanitra sy tsy mbola fantatra tanteraka fa tsy eo anelanelan'ny ankehitriny sy ny iray miavaka.
Ny Fanahy Masina sy ny roa taona
Io fomba fijery ny fanjakan’Andriamanitra io dia mitovy amin’izay ambara ao amin’ny Soratra Masina momba ny olona sy ny asan’ny Fanahy Masina. Jesosy dia nampanantena ny fiavian’ny Fanahy Masina ary naniraka Azy hiaraka amin’ny Ray mba hiaraka amintsika. Nitsoka ny Fanahy Masina tamin’ny mpianatra Izy, ary tamin’ny Pentekosta dia nidina tamin’ireo mpino tafavory izany. Ny Fanahy Masina dia nanome hery ny fiangonana Kristiana voalohany mba hijoro ho vavolombelona marina ny amin’ny asa fanompoan’i Kristy ary amin’izany no ahafahan’ny hafa mahita ny lalan’izy ireo ao amin’ny fanjakan’i Kristy. Naniraka ny olon’Andriamanitra eran’izao tontolo izao Izy hitory ny filazantsaran’ny Zanak’Andriamanitra. Anisan’ny iraka nampanaovin’ny Fanahy Masina isika. Na izany aza, tsy mbola fantatray tanteraka izany ary manantena fa ho tanteraka izany indray andro any. Nomarihin’i Paoly fa vao fiandohana fotsiny izao tontolo izao misy ny traikefa. Mampiasa ny sarin'ny mialoha na antoka na petra-bola (arrabon) izy mba hampitana ny hevitry ny ampahany amin'ny fanomezana mialoha, izay miaro ny fanomezana feno (2. Korintiana 1,22; 5,5). Ny sarin'ny lova ampiasaina manerana ny Testamenta Vaovao dia manoro hevitra ihany koa fa omena zavatra eto sy ankehitriny isika izay azo antoka fa ho antsika bebe kokoa amin'ny ho avy. Vakio ny tenin'i Paoly momba izany:
« Ao aminy [Kristy] koa no nanendrena antsika ho mpandova, izay voatendry rahateo mba hanao araka ny fikasan’Izay manao ny zavatra rehetra araka ny sitrapon’ny sitrapony (...) fanavotana, mba ho fananantsika ho fiderana ny voninahiny [...] Ary aoka Izy hanome anareo mason'ny fo mazava, mba ho fantatrareo izay fanantenana niantsoana anareo, endrey ny haren'ny voninahitry ny lovany ho an'ny olo-masina » (Efes 1,11; 14,18).
I Paoly koa dia mampiasa ilay sary izay anomezana antsika ankehitriny ny “voaloham-bokatra” avy amin’ny Fanahy Masina, fa tsy ny fahafenoany rehetra. Ny fiandohan’ny fijinjana ihany no hitantsika amin’izao fotoana izao, fa tsy ny fanomezany rehetra (Romana 8,23). Ny fanoharana manan-danja iray hafa ao amin’ny Baiboly dia ny hoe “nanandrana” ny fanomezana ho avy (Hebreo 6,4-5). Ao amin’ny taratasiny voalohany, i Petera dia manambatra ampahany maro amin’ilay piozila ary avy eo dia manoratra momba ireo izay nohamarinin’ny Fanahy Masina:
« Isaorana anie Andriamanitra, Rain’i Jesosy Kristy Tompontsika, Izay niteraka antsika ho amin’ny fanantenana velona, ​​araka ny haben’ny famindram-pony, tamin’ny nitsanganan’i Jesosy Kristy tamin’ny maty, dia lova tsy mety simba sy tsy misy loto ary tsy mety simba, izay tehirizina ao amin’ny tempoly. any an-danitra ho anareo, izay tehirizin’ny herin’Andriamanitra amin’ny finoana ho amin’ny famonjena, izay efa vonona haseho amin’ny andro farany.”1. Pt 1,3- iray).
Araka ny ahatsapantsika ny Fanahy Masina ankehitriny, dia tena ilaina ho antsika na dia mbola tsy fantatsika tanteraka aza izany. Rehefa miaina ny asany izao isika dia manondro fampandrosoana lehibe kokoa izay hitranga amin'ny andro iray. Ny fahatakarantsika azy ankehitriny dia manome fanantenana ny tsy ho diso fanantenana.
Ity tontolo ratsy ity ankehitriny
Ny fiainantsika ankehitriny amin'ny vanim-potoana ratsy ankehitriny dia fanatanterahana zava-dehibe. Ny asan'izao tontolo izao an'i Kristy, na dia nanjary fiafaran'ny fandresena aza izy io, dia mbola tsy namongotra ny vokatra sy ny vokadratsin'ny fianjeran'ny olona amin'izao fotoana na vanim-potoana izao. Ka tsy tokony hanantena isika fa ho faty izy ireo amin'ny fiverenan'i Jesosy. Ny fijoroana ho vavolombelona nomen'ny Testamenta Vaovao momba ny toetran'ny cosmos (anisan'izany ny olombelona) dia mbola tsy nahagaga. Tao amin'ny vavaky ny mpisoronabe izay novakiantsika tao amin'ny Evanjelin'i Jaona 17, dia nivavaka i Jesosy mba tsy ho afaka amin'ny toe-javatra misy antsika isika ankehitriny, na dia fantany aza fa hiaritra fijaliana, holavina ary fanenjehana isika amin'izao fotoana izao. Nasongadiny tao amin'ny Toriteny teo An-tendrombohitra fa eto sy ankehitriny isika dia mbola tsy mandray ny fanomezana fahasoavana rehetra izay namboarin'ny fanjakan'Andriamanitra ho antsika, ary ny hanoanana, ny hetahetantsika ny fahamarinana dia mbola tsy nahafa-po antsika. Fa kosa, hiaina fanenjehana izay taratry ny azy isika. Tahaka ny mazava no nanasongadinany fa ho tanteraka ny hetahetantsika, fa amin'ny fotoana ho avy ihany.
Nasongadin’ny apostoly Paoly fa ny tenantsika dia tsy aseho ho boky misokatra, fa “miafina miaraka amin’i Kristy ao amin’Andriamanitra” (Kolosiana). 3,3). Manazava izy fa, raha atao an’ohatra, dia vilany tany mitondra ny voninahitry ny fanatrehan’i Kristy ao anatiny, nefa tsy mbola naseho tamin’ny voninahitra rehetra.2. Korintiana 4,7), fa indray andro any (Kolosianina 3,4). Nasongadin’i Paoly fa “mandalo ny maha-izy an’izao tontolo izao.” ( Kor 7,31; jereo. 1. Johannes 2,8; 17) fa tsy mbola nahatratra ny tanjony farany izy. Ny mpanoratra ny Taratasy ho an’ny Hebrio dia miaiky avy hatrany fa hatramin’izao dia tsy ny zavatra rehetra no efa nampanaiky an’i Kristy sy ny azy (Hebreo). 2,8-9), na dia naharesy izao tontolo izao aza i Kristy (Jaona 16,33).
Ao amin’ny taratasiny ho an’ny fiangonan’i Roma, i Paoly dia milazalaza ny amin’ny hoe “mitsento sy matahotra” ny zavaboary rehetra ary “isika, izay manana ny Fanahy ho voaloham-bokatra, dia misento ato anatintsika ary maniry ny ho Zanaka, dia ny Vatana fanavotana antsika.” 8,22-23). Na dia efa nahavita ny fanompoany teo amin’izao tontolo izao aza i Kristy, dia tsy mbola maneho ny fahafenoan’ny fitondrany mpandresy ny maha-olombelona antsika ankehitriny. Mbola tafahitsoka amin'izao andro ratsy izao isika. Efa eo ny fanjakan’Andriamanitra nefa tsy mbola ao anatin’ny fahatanterahany. Hojerentsika ao amin’ny laharana manaraka ny tena fototry ny fanantenantsika ny amin’ny fahavitan’ny fanjakan’Andriamanitra sy ny fahatanterahan’ny fampanantenana ara-baiboly.
1 Ao amin'ny taratasy ho an'ny Hebreo 2,16 Hitantsika ny teny grika hoe epilambanetai, izay tsara adika amin’ny hoe “manaiky” fa tsy amin’ny hoe “fanampiana” na “miahiahy”. Sa Hebreo 8,9izay io teny io ihany no ampiasaina amin’ny fanafahan’Andriamanitra ny Isiraely amin’ny fehezin’ny fanandevozana ejipsianina.
2 Ny teny grika izay ampiasaina ho an'ity mandritra ny Testamenta Vaovao ary izay manantitrantitra indray amin'ny fanomezana ny anarany ny bokiny farany dia apokalypsis. Afaka miaraka amin'ny «fanambarana»,
Ny "fanambarana" sy ny "Fahatongavana" dia adika.